Jobsmalaysia - ဤကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူရှာဖွေအလုပ်အကိုင်အ Start နှင့်အလုပ်ရ!
Jobsmalaysia - လွှတ်တင်ခြင်းယနေ့တွင်ပြန်လည်စတင်မည်!
Jobsmalysia အကောင်းဆုံးနဲ့ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့ထိပ်တန်းပေါ်တယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင် jobsMalaysia အလုပ်ပေါ်တယ်ဖြစ်ပါသည် အလုပျသမားမြားအတှကျအကောင်းဆုံးနေရာ။ မည်သူမဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတခုနှင့်အတူရှာဖွေအလုပ်စတင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စိတ်ချသောကြောင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများနှင့်အလုပ်ရှင်များ။ ပြီးတော့သင်ကပင်စိတ်ကူးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကိုပိုပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကသင့်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုစတင်အလုပ်ရ။ ယခုအချိန်တွင် 241,057 ထက်ပိုလည်းမရှိ အလုပ်ရှာဖွေသူတက်ကြွစွာ။ သင်တို့သည်လည်းအခွင့်အလမ်းရသင့်ပါတယ်။ အားလုံးနေရာလွတ် JobsMalaysia အပေါ်ကြော်ငြာခံရဖို့ ဒေသခံငှားရမ်းများအတွက်ပေါ်တယ်.
ကောင်းပြီ, သငျသညျအချက်အလက်များ၏အပိုင်းပိုင်းရှာတှေ့နိုငျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ www.jobsmalaysia.gov.my တွင် အလုပ်အကိုင်အ site ကို။ အဘယ်ကြောင့်သူတို့နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်ရန်ကျိုးနပ်သည်။ ရိုးရှင်းစွာအတစ်ပါလျှင် အစိုးရအချို့စီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့နေသည်။ ဒါဟာကျိန်းသေကောင်းသောဖြစ်ရမည်။ နှင့်အထူးအဆိုပါများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ယေဘုယျအားအများပြည်သူဆိုင်ရာအချက်အလက်။ jobsmalaysia.gov.my က်ဘ်ဆိုက်ကြည့်ကြပါ။ ဤရွေ့ကား, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအလုပ်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကယ့်ကိုကောင်းပါတယ်။ နှင့်သေချာဘို့တ အလုပ်ရှာဖွေသူများအတွက်အကောင်းဆုံး။ အားလုံးမလေးရှားကျော်။ ဒါကြောင့်အစိုးရပေါ်တယ်နှင့်အတူစတင်ပါ။
ကောင်းပြီ, ကျိန်းသေက ဒေသခံအလုပ်သမားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့နေရာ။ ရိုးရှင်းစွာအဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့လူ့အရင်းအမြစ် ဝန်ကြီးဌာနသည်။ ယခုဒေသခံလုပ်သားများဖြစ်လာမှမလေးရှားရှိလူတိုင်းကူညီပေးနေသည်။ မလေးရှားအစိုးရကအထူးကြေညာချက်များဖန်ဆင်းတော်မူပြီ အလုပ်ရှင်များအဘို့ မလေးရှား၌တည်၏။ အခုတော့ဖြစ်ပါသည် ဒေသခံဈေးကွက်ထဲမှာအလုပ်ရှင်တွေအတွက်မဖြစ်မနေ။ ယေဘုယျအားဖြင့် JobsMalaysia.com အပေါ်အလုပ်အကိုင်နေရာလွတ် post ရန်, စကားပြော။ ဒီပေါ်တယ်အဓိကအားဖြင့်အစိုးရကပြုလို့ပဲ။ နှင့် ဒေသခံအခွင့်အာဏာ ယခုလုပ်သားများအားမရမန်နေဂျာ။ အစိုးရအတော်တော်များများအသစ်ကအမိန့်ရှိပါတယ်။ ထိုအသေချာအဘို့ထိုသူတို့၏တဦးစားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံလုပ်သားများငှားရမ်း။ ထိုလမ်းများတွင်စနစ်ဒေသခံအာဏာပိုင်များထံသတင်းပို့လာသည်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
မလေးရှားခုနှစ်, 13,627 အတွက်တက်ကြွစွာ 2019 နယူးအလုပ်ရှင်များလည်းမရှိ။
114,138 န်းကျင်နယူး VACANCY 2020 အတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်လာသည်။
183,433 အတွက် 2017Placement ထက်ပို။
500,000 ထက်ပို မလေးရှားကနေဒူဘိုင်းမှပြောင်းရွှေ့လုပ်သားများ.
ပင် အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများ အဲဒီမှာအလုပ်ရှာတှေ့နိုငျ !.
Jobmalysia.com ထိပ်တန်း shared ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးဖြစ်ကြ၏တောင်မှအစိုးရက အိန္ဒိယအတွက်ဒီအလုပ်ဆိုက်နှင့်လူကြိုက်များထုတ်လုပ်။ ဥပမာဒုတိယလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး Datuk Mahfuz အိုမာ။ စာမျက်နှာအနည်းငယ်ကြေညာချက်များစီမံခန့်ခွဲ။ သောကြောင့် JobsMalaysia ၏, မလေးရှားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစျေးကွက်များအတွက်အဓိကပေါ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျမလေးရှားနိုင်ငံတွင်အလုပ်ရှာရန်ရှာနေနေတယ်ဆိုရင်။ သငျသညျကျိန်းသေသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ 135,000 ထက်ပို Google ကအတွက်ရှာဖွေမှုများကိုလစဉ်လတိုင်း.
ကွာလာလမ်ပူ, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, အလုပျအတှကျကောငျးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှင့် အလုပ်ရှာဖွေသူများအဲဒီအခြေအနေတွေအောက်မှာ, ဤအရပ်ဌာနကိုနှိပ်။ နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အအဲဒီမှာအတော်လေးကောင်းပါတယ်နှင့်အခြားတစ်ဖက်တွင်, တန်ဖိုးရှိတိုင်းမိနစ်ကြိုးစားရန်။ ကမ္ဘာအဝှမ်းမှအလုပ်ရှာဖွေသူများ, ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိနေဆဲရှိပါတယ် ပြည်ပမှာအလုပျသမားမြားအတှကျဖြစ်နိုင်ခြေ။ ဒါကြောင့်အဘယျကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်းနှင့်အလုပ်အစာရှောင်ရှာတွေ့ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် တကမ္ဘာလုံးကိုစုဆောင်း.
အဆိုပါ Jobsmalysia ကဒီမှာပြီးလူကြိုက်များခေါင်းစဉ်ရှိသေး၏။ အထူးသဖြင့် ဒေသခံအလုပ်သမားတွေအတွက်။ ရှင်းမှအစိုးရကကြောင့်, ဒီအလုပ်အကိုင်များ site ကိုကူညီပေးနေ။ နှင့် မှတ်ပုံတင်ရန်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်လူတွေရလဒ်များကိုနှင့်အတူအတော်လေးပျော်ရွှင်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်, သင်ကကြည့်သင့်ပါတယ်။ သင်ပြုနေချိန်တွင်အလုပ်ရှာဖွေစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းငှါကြောင့်ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဒေသခံအလုပ်ရှင်နှင့်အာဏာပိုင်များ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကြည့်ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်ရဲ့အလုပ်ရှာဖွေ၏နောက်ခံ။ နှင့်အတူအလုပ်ရရန်ကြိုးစား Jobsmalysia.gov။ ဒီကုမ္ပဏီကျိန်းသေလူတွေအများကြီးကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကောင်းပြီ, ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရပါစေ။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စ သင်တစ်ဦးကိုဒေသခံအလုပ်သမားလျှင်။ သို့မဟုတ်ပင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ကမ္ဘာလုံးကျော်အတော်ကြာကုမ္ပဏီများမှပြန်လည်သုံးသပ်။ နှင့်အသစ်နှင့်ကုမ္ပဏီများရှိခဲ့သညျ။ ကျိန်းသေလက်ခံရရှိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HR အဖွဲ့ထံမှ အနည်းငယ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ နှင့်ဤကုမ္ပဏီတစ်ခုကြယ်ငါးပွင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ရှိပါတယ်။
သူတို့တစ်တွေအစိုးရ-related စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဟာကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ကျွမ်းကျင်သူများအဘို့ကောင်းသောအလုပ်အကိုင်များအခွင့်အလမ်းပေး နှင့်ဒေသခံအလုပ်သမားများက။ ဒါကြောင့်သူတို့နှင့်အတူသွားရမယ့်စမတ်စိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကောင်းသောပေးအပ် ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့လမ်းညွှန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဘို့အသီးအသီးဘာသာစကားကိုသတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ဒူဘိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒါကြောင့်စိတ်ကို၌ဤအတူသင်အခုလမ်းညွှန်များရနိုငျသညျ, အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာအကြံပေးချက်များနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားနှင့်အတူ။